Du bist hier: Startseite / Waxaa jira waardiye wanaagsan oo ka shaqeeya meesha aan deganahay. Wuu...
https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png 0 0 editorialteam https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png editorialteam2016-10-18 09:39:092016-10-20 11:28:41Waxaa jira waardiye wanaagsan oo ka shaqeeya meesha aan deganahay. Wuu i caawiyaa wuxuuna ii fududeeyaa in aan wax baddan sameeyo. Laakiin shalay wuxuu si ku cel-celis ah u taabtay jirkayga. Anigu midaasi ma jeclaysan. Maxaa ila gudboon in aan sameeyo?